Ndụmọdụ Semalt: 7 Ngwaọrụ Ngwá Ọrụ Weebụ na Ngwa Ngwaọrụ
Wepu weebụsaịtị ma wepụ ọdịnaya bụ ọrụ nchịkọta data maka azụmahịa dị n'ịntanetị . A na-ekpochapụ ọtụtụ ebe na saịtị, a na-ewepụtakwa data na kwa ụbọchị. A na-arụ ọrụ ụfọdụ na ngwanrọ na ngwá ọrụ zuru oke, ebe ndị ọzọ nwere ike iji aka ha rụchaa. Ngwaọrụ ndị a abụghị naanị nnukwu ma ha enweghị ụgwọ ma nye ọtụtụ ndị ọrụ ha ọtụtụ ọrụ - bridal hats uk online.
iMacros bụ ndọtị maka ihe nchọgharị weebụ na ọ bụ otu n'ime ngwanrọ akụrụngwa maka ndị mmemme na ndị na-abụghị programmers. Ọ na-enye gị ohere ijide ma regharịa ihe omume weebụ dịka ule, nbudata na ibudata ihe oyiyi na ederede. Ọ na-emekwa ka ọ dịrị gị mfe ịbubata na mbupu data site na iji databases dị iche iche, CV na XML faịlụ na ihe ndị ọzọ. iMacros na-eme ihe aga-eme na ule weebụ ma na-agba.
PromptCloud a maara maka aha ya nchịkọta weebụ , ntanetị weebụ na ọrụ nchịkọta data. Ọ dị mma maka ụlọ ọrụ na ntanetị na ntanetị na ntanetị nwere ike wepụ data maka gị n'asụsụ dị iche iche na site na ntanetị dịgasị iche iche. Ọ na-eji teknụzụ dịgasị iche iche iji rụọ ọrụ gị nke ọma. Ị nwere ike iwepu ozi site na blọọgụ, ebe mgbasa ozi mgbasa ozi, nyochaa weebụsaịtị, ntanetị n'ịntanetị, na ụzọ ndị njem.
WinAutomation bụ ngwá ọrụ na-arụ ọrụ na-enyere ndị ọrụ aka na-arụ ọrụ dịgasị iche iche. Nke a na-enyere gị aka ịnye ụdị, nchọta data mpaghara, webata ibe weebụ, ma chekwaa wepụtara data na ụdị ihe oyiyi na ntinye ederede Ị nwekwara ike igbunye data amịpụtara na mpempe akwụkwọ Excel gị, rụọ ọrụ dịgasị iche iche, ma hazie faịlụ gị n'ụzọ ka mma. WinAutomation nwekwara uru maka ọrụ ntanetị na ọrụ nlekọta desktọọpụ
4. Ngwa Ntanetị Anya
Web Ripper Web bụ ihe ngwanrọ a na-eji eme ihe iji wepu weebụsaịtị, iwepụta data, ma wepụ ọdịnaya bara uru n'otu ntabi anya ọ bụ otu n'ime ọrụ ndị kachasị ike. nchịkọta akụkọ, na-enye gị nsonaazụ kachasị mma, ngwá ọrụ a na-eweghachite data site na ibe weebụ, na-enyere gị aka ibudata ozi ziri ezi na nke emelitere naanị.
WebHarvy bụ usoro nyocha nke anya na-akpaghị aka na-achọpụta ihe dị iche iche na weebụ ns ma chịkọta data bara uru maka gị. Ọ na-ewepu ibe ya ugboro ugboro, tinyere ederede, ihe oyiyi, ozi ịntanetị, na URL. WebHarvy na-enye gị ohere wepu data site na weebụsaịtị ndị na-adịghị ekwekarị ka ha nweta data ha.
Darcy Ripper bụ onye ntanetị weebụ na-esite na Java na onye nchịkọta data. A maara nke a maka njirimara enyi ya, eserese eserese yana enwere ike iji ya ibudata data nke ọma n'ime sekọnd. Darcy Ripper na-ahapụ gị ịmepụta URL ọ bụla maka data na faịlụ nbudata na gị n'ọtụtụ usoro.
Ubot Studio bụ otu n'ime ihe ntanetị weebụ kachasị mma ma kachasị mma. Ọ na-abia ma n'efu ma kwụọ ụgwọ ụgwọ ma jiri ngwa weebụ. Ubot Studio na-enye ohere ka anyị wuo edemede ma mezue ọtụtụ omume dịka ntinye data, nyocha weebụ, na njikwa ọdịnaya. Ị nwere ike ichekwa faịlụ gị na nchekwa data ya ma ọ bụ budata na diski ike gị n'ime ihe nkeji.